ရန်ကုန်မြို့ အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံတွင် ကိုဗစ်လူနာများ လက်ခံကုသပေးမည် – DVB
ရန်ကုန်မြို့ အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံတွင် ကိုဗစ်လူနာများ လက်ခံကုသပေးမည်
ရန်ကုန်မြို့က နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာတွေကို လက်ခံကုသပေးသွားမယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။
ပြင်ပလူနာအနေနဲ့ရော အတွင်းလူနာအနေနဲ့ပါ လက်ခံကုသပေးသွားမှာဖြစ်ကာ သံသယရှိ လူနာတွေကို ပြင်ပလူနာဌာန Fever Clinic မှာ နေ့စဉ်မနက် ၉ နာရီကနေ ည နေ ၆ နာရီအထိ ပြသနိုင်ပြီး ဆေးရုံရဲ့ နေ့စဉ်လက်ခံကုသနိုင်တဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ကုသပေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အတွင်းလူနာအနေနဲ့ လက်ခံကုသမှုမှာလည်း ဆေးရုံရဲ့ နေ့စဉ် လက်ခံကုသနိုင်တဲ့ ကုတင်အရေအတွက်၊ လူနာရဲ့ ရောဂါအခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြီး ကုသပေးမယ့် ဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ ရွေးချယ်လက်ခံနိုင်မှု စတဲ့ အခြေအနေတွေပေါ် မူတည်ကာ ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းတဲ့စနစ်နဲ့ လူနာတွေကို ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ကာ လက်ခံကုသပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကုသမှုခံယူလိုတဲ့ လူနာတွေအနေနဲ့ ဖော်ပြပါ Viber ဖုန်းနံပါတ်-၀၉ ၇၅၆၈၈၁၀၇၉ နဲ့ ၀၉ ၇၇၈၃၅၂၁၃၃၊ ပြင်ပလူနာတွေအတွက် ၀၉ ၉၇၁၈၀၄၇၀၅ တို့ကို ဆက်သွယ်ကာ လူနာရဲ့ အချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့ အမည်၊ အသက်၊ ကျား/မ၊ ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွား သည့်နေ့မှ ယနေ့အထိရက်ပေါင်း(?)ရက်၊ သွေးအတွင်း အောက်စီဂျင်ရှိမှုရာခိုင်နှုန်း (SPO2 %) ယမန်နေ့ (?)၊ ယနေ့ (?)၊ လူနာရဲ့ ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားသည့်အချက်များ၊ လိပ်စာ (မြို့နယ်)စတာတွေကို ဖြည့်သွင်းပေးပို့နိုင်ကြောင်းနဲ့ စာရင်းပေးသွင်းထားတဲ့ လူနာတွေကို အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံက အလျဉ်းသင့်သလို ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကိုဗစ်-၁၉ တတိယလှိုင်း ကူးစက်မှုတွေ မြင့်တက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လက်ရှိ အချိန်ထိ စုစုပေါင်း သေဆုံးသူ ၁၁,၂၆၂ ယောက်နဲ့ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း ၃၂၂,၈၃၈ ယောက် ရှိခဲ့ပြီလို့ စစ်ကောင်စီ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဩဂုတ် ၆ ရက်ညမှာ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
လက်ရှိအချိန် မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အနှံ့ ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုတွေ ရှိနေပေမဲ့ လူနေထူထပ်တဲ့ မြို့တော် ရန်ကုန်မှာတော့ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုနဲ့ သေဆုံးမှုတွေ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်နေပြီး ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသမှုခံယူနိုင်ဖို့ အခက်အခဲ၊ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်တဲ့ ဆေးခန်း၊ ဆရာဝန်၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း အခက်အခဲ၊ ဒါ့အပြင် မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုမှာ လိုအပ်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်ရရှိနိုင်မှု အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့က လူငယ်များ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ